Thebọchị elu igwe dara: ịhụnanya philos na pen nke Megan Maxwell | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Thebọchị elu igwe dara
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya
Thebọchị elu igwe dara (2016) bụ akwụkwọ ọgụgụ onye Spen María del Carmen Rodríguez del Álamo — nke edebanyere n'okpuru aha nzuzo Megan Maxwell-. Egwuregwu ahụ na-egosi akụkọ na-akpali akpali banyere ụfọdụ ndị enyi, bụ ndị sitere na nwata mebere nkekọ nke nwanne na nwanne. Onye edemede ahụ lekwasịrị anya na ịtụgharị uche na nkata echiche ndị ọzọ nke ezi ịhụnanya ( philos), site na ahịrị ndị jupụtara na mmetụta na mmetụta miri emi na-eme ka mmụọ nsọ dịkwuo mma.
Maxwell wulitela oru oma na akwukwo edemede nwere ihe kariri akwukwo 40. na akụkọ asaa, ọrụ ọ natara ọtụtụ onyinye. Ọ bụ ọkachamara na egwuregwu ọchị, ọ bụ ezie na ọ gbalịrị en ndị ọzọ ụdị, dị ka nwa ọkụ na nke na-akpali agụụ mmekọahụ. Nke ikpeazụ na-apụta ìhè Juo m ihe obula ichoro (2012), akuko mbu nke o kowara na nke saga malitere Jụọ m.
1 Na nchịkọta nke Day the Sky Falls
1.1 Buru ụzọ zute
1.2 A mụrụ ezigbo ọbụbụenyi
1.3 Nnukwu mgbanwe
1.4 Ihe niile amalitela
2 Nyocha ụbọchị elu igwe dara
2.2 Otutu mmetụta uche
2.3.3 Ihe odide ndị ọzọ
3 Banyere onye edemede
3.1 Egwuregwu edemede
Na nchịkọta nke Day the Sky Falls
Buru ụzọ zute
Alba dị obere afọ asaa, onye, mgbe ịlaghachi ụlọ ya na nne ya — Teresa—, na-ezute iberibe arịa dị iche iche n'ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. You rụchaa ịrị steepụ, lee nwa nwute nke ukwuu, gbara aza site na akwa. Nwa nwoke aha ya bụ Nacho, dị ugbu a na nwa agbọghọ ahụ ka batara ya na ụmụnne ya nwoke - Luis, 11, na Lena, 4 - n'ụlọ Remedios dị ha nso.
Nwa agbọghọ ahụ malitere ịkparịta ụka dị ka enyi na enyi Nacho, onye le ekwupụta na nne ya na nna ya nwụnahụrụ ya. Alba, ihe o kwuru kpaliri, gwa ya na ya nwere ike ịga kpọọ ya n’ụlọ ya mgbe ọ bụla ọ chọrọ. Emechaa, Remedios kwetara ịbịa leta ka nwa nwa ya nwee ike nwee obere anụrị. N'ebe ahụ, ọ na-agwa Teresa ihe ọghọm nke nwa ya na ọgọ ya nwoke, nne na nna nke ụmụ atọ ahụ nwụrụ.
N'oge a, akụkọ a na-agabiga n'oge na-adịghị mma. N'etiti ahịrị, Alba gwara Nacho na ndị mụrụ ya nwere ike ịbụ nke ya, ha kwekwara ibe ha nkwa ọbụbụenyi niile.
Thebọchị elu igwe dị ...
A mụrụ ezigbo ọbụbụenyi
Mgbe ihe mere gasịrị, a hapụrụ ụmụ atọ ahụ ka ha na-elekọta nne nne ha dị ụtọ Remedios, mmekọrịta chiri anya nke na-eme ka Nacho na Alba bụrụ ndị na-enweghị ike ịwepụ na ịkwado ọbụbụenyi na-enweghị ike ịhapụ. Ka ọ na-erule oge nke iri asatọ, ha abụọ akwụsịla ịbụ ụmụaka ma gbakọta ọnụ rue okenye. Ha tolitere dị ka nnukwu ezinụlọ, ndị na-eto eto, karịa ndị enyi, enweelarị ha dị ka ụmụnne.
Alba na Nacho nọgide na-enwe mmekọrịta chiri anya, na-adabere mgbe niile na ihe ọma na ihe ọjọọ. Ha abụọ na-achọ ịga n'ihu na ndụ ha, y enwere mgbe ihe miri emi nke ọbụbụenyi dị n'etiti ha na-emetụta. Alba hụrụ n'anya onye ara na-eme ara ya, ruo n'ókè nke ikpu ìsì n'akụkụ dị iche iche. Isiokwu a na-achịkwa, ma chọọ ịhapụ ya na ezinụlọ ya, ọkachasị site na enyi ya ọ hụrụ n’anya.
N’agbanyeghi Nacho dọrọ ya aka ná ntị Dawn si nsogbu na onye a kpatara gi, ma Ella adighi-anuma mechaa lụru nwanyi. Di ya kpọgara ya Madrid, kewapụ ya na onye ọ bụla; n'oge ahụ, Nacho kpebiri ịchọ ụzọ ọzọ wee kwaga London. N'ebe ahụ, ọdịmma ya na-agbanwe mgbe ọ zutere onye mkpụrụ obi ya, mana obi ụtọ anaghị adịte aka, n'ihi na onye ahụ nwụrụ n'ihi ọrịa ọzọ.
Ihe niile amalitela
Mgbe ịgba alụkwaghịm ya gasịrị, Alba kpebiri ịga London iji jikọta nnukwu enyi ya, n’enweghịdị enyo ihe ọ na-agabiga. Mgbe i rutere, ị ga-ahụ ya ebe ọ na-amụmụghị ọnụ ọchị ahụ nke e ji mara ya. Inghụ ibe ha, ha abụọ nwere mmetụta miri emi. Ọ na-achịkwa iji mee ka ọ pụọ na ndakpọ ahụ na-ada mba ma ha mekwawanye nwanne ha nwoke, mana n'oge na-adịghị anya ha chọpụtara eziokwu dị oke egwu nke na-etinye ha n'ule ahụ.
A chọpụtara na Nacho nwere ọrịa amachaghị nke mebisiri ihe n’oge ahụ. Ga-agbaba, n'ihi na ha na-emesi ya ike na ọ na-efe efe ma na-egbu egbu, na mgbakwunye, enweghị ọgwụgwọ dị irè. Alba anaghị ahapụ enyi ya ma gbaa gị ume kwa ụbọchị ka ị gaa n’ihu. N'etiti nke ahụ, ịhụnanya kụrụ aka n'ọnụ ụzọ nke obi Alba, nke a ọ ga-abụ ìhè ọ chọrọ n'akụkụ oke ọchịchịrị?
Nyocha ụbọchị elu igwe dara
Thebọchị elu igwe dara bu ihe omuma nke edere n’agbata Spain na London, o nwere peeji 416 nke e kewara n’ime isi iri ato na ato. Akụkọ a malitere na 1974, mgbe ndị na-akwado ya ga-ezute na nke mbụ ya, wee gafere na afọ 80-90. A na-akọ ya na onye nke atọ, jiri asụsụ dị mfe, nke na-enye ọfụma ma na-atọ ụtọ ọgụgụ..
Otutu mmetụta uche
Akuko a juputara na mmetụta di omimi, obu ihe ndi ozo. Ọụ na iru uju na-egosipụta, kamakwa ọtụtụ olile-anya n ’ihu nsogbu. N'otu aka ahụ, a gosipụtara ịhụnanya karịrị di na nwunye (ahụ philos), nke na-eme ka ezinụlọ na ndị enyi dịrị n’otu. N'okwu ya, onye edemede ahụ kwupụtara na nke a: "Ọbara na-eme gị onye ikwu, mana naanị iguzosi ike n'ihe na ịhụnanya na-eme ka ị bụrụ ezinụlọ."
Ọ bụ nwanyị mara mma. eji obi uto, muta, ezigbo ada, ezigbo enyi na obi di nma. N'ihi enweghị nghọta ya na ịhụnanya ndọrọ ndọrọ ochichi ya, onye ọjọọ jikọtara ya, na Ọ ghaghị itozu n'ike n'ike mgbe alụmdi na nwunye gasịrị. Ọ na-esi n'ọnọdụ ahụ wusie ike, nke ga-adị oke mkpa iji kwado ezigbo enyi ya, Nacho, onye ọ hụrụ n'anya na-enweghị atụ.
Es nwoke dị ndụ ma na-apụ apụ, ọ hụrụ n'anya ịnụ ụtọ ndụ ya n'ụzọ zuru oke. Mgbe ihe ndọghachi azụ na-aga n'ihu mgbe ọ na-achọ onye ọ ga-alụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ daa mbà na echiche ahụ, mana njem ị na-aga London na-eme ya ka ọ daba n'ịhụnanya. Site na nwata, Ọ bụ ezigbo enyi Alba, ọ hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma soro ya gosipụta onwe ya dịka ọ dị. N'agbanyeghị na ọ na-arịa ọrịa ọbara na njedebe, ọ dịghị mgbe ọ na-enweghị nchekwube ma na-achọ ịnye ya ndị niile ọ hụrụ n'anya.
Ihe odide nke akwukwo a bu ndi mmadu kwa ubochi, ndi amara na ndi nwere ezi obi. Onye obula, ma nke mbido ya na nke ya, mejuputa akuko ma weta ogbako na ụkpụrụ di nkpa. Na mgbakwunye na ndị protagonists, nsonye nke nne ochie, Blanca na Remedios; nne na nna. Teresa na José; na ụmụnna, bụ́ Luis na Lena.
Na akụkọ a, Megan maxwell na-eji ụzọ aghụghọ na ọkachamara akọwa ọrịa gburu ọtụtụ mmadụ na Spen. Na nke a, onye edemede ahụ gosipụtara eziokwu nke oge ahụ na otu ọha mmadụ si chee ọnọdụ a ihu, ebe ọ bụ na ruo ogologo oge, e weere ya dị ka nkwanye.
Maria del Carmen Rodriguez nke Alamo amuru na Fraịdee, Febụwarị 19, 1965 na Nuremberg, Germany; nna ya bu american na nke ya nne Spanish. Mgbe ọ dị naanị ọnwa isii, nne ya kpebiri ịlaghachi ya na ya ruo Spen. Kemgbe ahụ, o biri n'ọtụtụ obodo na mba ahụ, dịka: Barcelona, ​​Cádiz na Madrid, ọ bụ ya mere o ji nwee obodo Spain.
Mgbe nwa ya nwoke na-arịa ọrịa, o kpebiri ịkwụsị ọrụ ya iji lekọta ya n'ụlọ. Ebe ahụ, Ọ malitere usoro akwụkwọ ntanetị n'ịntanetị wee malite ide ọtụtụ akwụkwọ akụkọ n'okpuru aha "Megan Maxwell." Mgbe ihe karịrị afọ iri nke akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma, na 2009, a nakweere akụkọ mbụ ya: Agwara m gị, na 2010 o meriri International Nrite maka Ihunanya Novel Seseña.
Kemgbe ahụ, Onye edemede ahụ akwụsịbeghị, ọ bipụtara akwụkwọ akụkọ iri anọ na ise nke ọ gụnyere sagas atọ: Ndị dike Maxwell, jụọ m y Maa. On ya website, ọ na-ekwupụta: “Na-amasị m ide ihunanya ntochi na m na-ebipụta Genres dị iche iche dị ka nwa ọkụ, dịkọrọ ndụ, ochie, njem trime y erotica”. Otu ụdị agwakọta e ji mara na-aga nke ọma ọrụ nke Spanish.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akwụkwọ akụkọ ịhụnanya » Thebọchị elu igwe dara
Memoir akwụkwọ nke geisha
Katidral nke Oké Osimiri Book